Amaphephandaba Akafile, Ukuthengisa Izindaba Kufile | Martech Zone
Amaphephandaba Akafile, Ukuthengisa Izindaba Kufile
NgeSonto, ngoMashi 25, 2007 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
UDave Winer, URobert Scoble, uScott Karp, Mathewu Ingram, futhi ithani labanye bebelokhu bebhala ngeposi likaRobert, Amaphephandaba afile.
Ngizoqhubekela phambili… izindaba zokuthengisa zifile.
Lapho. Ngishilo. Njengoba sengisebenze iminyaka engaphezu kweyishumi embonini yamaphephandaba, ngisho khona. Iqiniso ngukuthi amaphephandaba awasazithengisi izindaba ngokuningi njengokuthengisa kwawo. Lezi zindaba sezibe sekwesibili ekuthengisweni kwamaphephandaba isikhathi eside. Amaphephandaba abe nombala ngokuthengisa ukukhangisa. Amaphephandaba azenzekelayo izinhlelo zokukhangisa ukuthengisa ukukhangisa. Amaphephandaba akha izitshalo zamaphephandaba ezintsha zokukhangisa ezisezingeni elingcono. Amaphephandaba manje athengisa iposi eliqondile, omagazini, okushicilelwe ngokwezifiso… hhayi ngoba bethengisa izindaba kodwa ngoba kwandisa imali engenayo yokukhangisa.
Izintatheli eziningi zizocasulwa ngamazwi ami. Ngiyaxolisa kakhulu ngoba ngiyazihlonipha kakhulu izintatheli. Ngena kunoma yiliphi igumbi lezindaba, noma kunjalo, uzobona isabelomali sinqunyiwe, abahleli besebenza ngesandla esifushane, amaphephandaba egcwalisa izikhala ngawo AP okuqukethwe. Abashicileli bashicilela izikhangiso, hhayi izindaba. Izindaba zigcwalisa phakathi kwezikhangiso ngoba izikhangiso ziletha imali.
Amasu amaningi okusakaza ephephandabeni empeleni abeka izikhangiso ngaphezu kwezindaba… "Thenga iSunday Newspaper futhi uzothola amaRandi angaphezulu kwama- $ 100 ngamakhuphoni." Angikwazi ukucabanga ukuthi lokho kwenza intatheli izizwe kanjani… ibekwa endaweni engafanele isigqebhezana samasenti angama-25 sephepha lasendlini yangasese.
Angicabangi ukuthi lokhu kwehluke kakhulu kunokuvela kwezinye izimboni, noma kunjalo. Cabanga ukuthi umakhenikha kwakufanele abe nekhono kanjani ukukhipha amasethi we-micrometer nokwakha izinjini zezimoto. Labo machinists babengamaciko, befunda umsebenzi wabo eminyakeni eminingi, befunda ezikoleni zokuhweba, befunda izinsimbi ezithuthukile, izibalo kanye nokusebenza kwemishini esindayo. Qagela? Zishintshiwe, nazo. CNC Izigayo namarobhothi sekushintshe ochwepheshe abanekhono. Umuntu usengakwazi ukuklama kukhompyutha bese ekhipha ngokushesha izingxenye zawo ngaphandle kokungenelela komuntu.
Ngabe lokho kusho ukuthi amaMachinists awahlonishwa? Vele akunjalo. Zivele zafakwa esikhundleni. Izintatheli ziyashintshwa, nazo. Ngiyazi, ngiyazi… izintatheli zinomthwalo wemfanelo, zifundisiwe, ziqinisekisa imithombo, zibhekele amazwi azo. Konke lokhu kuyiqiniso kepha ezomnotho yilokho ekugcineni okunqobayo. Buka izindaba zakusihlwa noma ufunde iphephandaba futhi ngiyaqinisekisa ukuthi uzobona okungenani ireferensi eyodwa kubhulogi, ividiyo elayishiwe, noma iwebhusayithi. Izindaba azisatholakali futhi zisatshalaliswa yizintatheli, zitholwa yimina nawe bese zisakazwa nge-Intanethi.
Okwenzeke ngempela lapha ukuthi abathengi ' kudingeka ngoba ukuthenga izindaba sezihambile. Izintatheli namaphephandaba bekuyizinto eziphakathi komphakathi nezindaba. Kwakungekho okunye ukukhetha. Manje ukukhetha akunamkhawulo futhi kushibhile. Ingabe ikhwalithi ilile? Mhlawumbe. Kufana nokuqhathanisa i-Wikipedia ne-Encyclopedia Brittanica. I-Wikipedia inemininingwane ethe xaxa futhi ayibizi ngisho indibilishi. IBrittanica inengxenyana yezindatshana kodwa inekhwalithi engcono. Wagcina nini ukuthenga i-encyclopedia? Leyo impendulo yakho.
Iqiniso ukuthi ngingabhala ngalo Ibhulogi entsha yakwaGoogle. Okuthunyelwe kungahle kube namaphutha esipelingi nohlelo, kungahle kungabi nezinkomba, kungahle kungabi okujabulisayo njengoba bekuzoba ekhasini le-Times Technology - kepha kufinyelele ezinkulungwaneni zabafundi abangenandaba ngobuqotho ngalezo zinto. Bakwazile ukuthi ngibhale ngakho futhi manje sengisebenzisa lokho okuqukethwe ukuthuthukisa amasayithi abo. Akuzange kuthathe intatheli ukuthi iphule udaba.
I-Intanethi iyindlela entsha esusa izindaba emaphepheni futhi izintatheli. Kuyadabukisa ngandlela thile, ukuhweba okuhle okuzonyamalala. Kusazoba nezintatheli, hhayi nje eziningi. Kusazoba khona amaphephandaba, hhayi nje amaningi. Masibhekane nakho, noma kunjalo. Amaphephandaba azoqhubeka nokuthola ezinye izindlela zokuthengisa ukukhangisa. Kungenzeka kungabi uyinki ezihlahleni ezifile, kepha bazothola indlela.
Amaphephandaba awafile, izindaba zokuthengisa zifile.
Ukuphathwa Kokuphendula Nge-imeyili
Mar 25, 2007 ku-8: 20 PM
> Amaphephandaba manje athengisa ngeposi eliqondile, omagazini, okushicilelwe ngokwezifiso?
Ngikwazi ukuhlobana nalokho. Iphepha lethu kabili lamasonto onke linamapheshana amaningi ngoLwesibili kunamakhasi ezindaba.
Ngokufana nezimboni zomculo nama-movie imboni yamaphephandaba kufanele ithole izindlela ezintsha zokuzithengisa - yenze kube yinto yansuku zonke abantu abangakhathazeki ngayo ukukhipha i-1.50.
Lokhu kuhamba kakhulu emaphephandabeni endawo amancane
Mar 25, 2007 ku-10: 07 PM
Ngiyalithanda iphuzu lakho maqondana nezindaba zasendaweni. Ngisalijabulela iphephandaba lethu lezebhizinisi lapha endaweni kanye nephephandaba lami lomphakathi. Basenenzuzo enkulu ngaphezu kwenetha - ukuxhumana kwabo nomphakathi.
Kuyindida ukuthi wonke amaphephandaba amakhulu ayaqhubeka nokuthengisela imidondoshiya emikhulu eyenza izindaba zibe sezingeni eliphakeme ngokuqhubekayo. Lapha e-Indy, iThe Star iphethwe nguGannett. UGannett uyaqhubeka nokusika izinsizakusebenza zasendaweni futhi azame ukuqhubekisela phambili izinkampani ngokuhlanganiswa kohlelo. Kusika iphepha emphakathini, noma kunjalo. Ukuzibulala.
Akufanele nje ukuthi ngithenge iphepha. Ngenze njalo ZONKE IZINSUKU iminyaka engaphezu kweyishumi. Ngingasho ngobuqotho ukuthi anginalo ulwazi oluncane ngokuthola izindaba zami mahhala online.
Mar 25, 2007 ku-10: 16 PM
ECanada - ikakhulukazi i-Ontario konke amaphephandaba amancane aphethwe ngesinye sezikhulu ezimbili zezindaba. Angicabangi ukuthi kukhona amaphephandaba azimele ngokweqiniso anoma yimuphi umphumela osele emincane ukuze ahlanganise amadolobha noma amadolobha amakhulu.
Lokhu kujabulise kakhulu iminyaka emihlanu kuya kweyishumi edlule lapho izigebenga ezimbili zathenga khona. Ngicabanga ukuthi empeleni silahlekelwe okuthile okuyigugu lapho lokho kwenzeka.
Mar 26, 2007 ku-2: 07 PM
I-athikili enhle! Angicabangi ukuthi lokhu kufanele kusimangaze kakhulu - selokhu iwebhu yaqala ukubulala ama-classifieds amaphephandaba abe senkingeni, noma ngabe kufanele okungenani abone ukuthi inkinga isendleleni.
Ngo-Apr 12, i-2007 ku-9: 48 AM
Inkinga amaphephandaba awazithengisanga izindaba amashumi eminyaka. Kwake kwaba nezimpi zamaphephandaba ngenxa yezindaba ezishisayo. Impi yokugcina yalolu hlobo ubani angayikhumbula?
Umhleli ophezulu waleli phephandaba kufanele futhi abe ngumthengisi ohamba phambili futhi abe isikhulu sezokumaketha. Uhambo oluya kunoma iyiphi i-newsstand enkulu lungafakazela ukuthi lokhu akunjalo ezweni lanamuhla.
Bheka izembozo zangaphambili zomagazini ku-newsstand ngokuqhathaniswa namakhasi angaphambili amaphephandaba akhonjiswe lapho. Umuntu angaphikisa ukuthi iningi lomagazini lisebenzisa amaqhinga ashibhile angama-78-Ways-to-Refresh-Your-Sex-Life ”ukuthengisa abafundi. Noma kunjalo akunakuphikwa ukuthi amaphephandaba ngaphansi kokuhlelekile athengisa izindaba zawo futhi afaka okuqukethwe kwabafundi. Kucishe kube sengathi sisebenzela ukwenza ikhasi lokuqala libe yisicefe futhi lingabheki ngendlela okudingeka ngayo.
Abahleli bazophikisa ngokuthi “ukukhuthaza” kwehlisa ibhizinisi labo. Ngingasho ukuthi umbiko omuhle kakhulu, obaluleke kakhulu, ophenyayo onqoba iPulitzer yalo nyaka awusizi ngalutho uma iningi lamakhasimende ephephandaba lingazihluphi ngokufunda lolu chungechunge.
Kufanele sikuthole kahle ukuthengisa izindaba futhi. Kufanele sikuthole kahle ukutshela abafundi ukuthi yini ekulo uma befunda.
Ekugcineni kufanele sijabule ngezindaba nokunye okuqukethwe esikuletha nsuku zonke, masonto onke kanye nenyanga uqobo bese sixhumanisa lelo thokozi ngendlela ethelelekayo kulabo esethemba ukufinyelela kubo futhi sibathonye ngezindaba. Uma thina njengabahleli siwenza lo msebenzi, amadola azolandela futhi namaphephandaba (noma ngabe ahanjiswa kanjani) azochuma.